झापामा भुत बनेर तर्साउने व्यक्तिको बल्ल भयो पर्दाफास, आखिर को थिए जसले भूत भन्दै ढुंगा हाने (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
झापामा भुत बनेर तर्साउने व्यक्तिको बल्ल भयो पर्दाफास, आखिर को थिए जसले भूत भन्दै ढुंगा हाने (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki June 24, 2019
ढुंगा प्रहार भुतले नै गरेको जस्तो लाग्छ भन्दै परिवारहरु त्रसित भएका छन् । सोमबार पनि ढुंगा प्रहार भएपछि धामी झाक्री राखेपछि ढुंगा प्रहार भएको छैन भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । बास्तममा त्यो घटना कसरि घट्यो त ? के भुत ले नै रात दिउसो ढुंगा प्रहार गरेको हो त ? अथवा कुनै व्यक्तिले डर देखाउन लुकेर ढुंगा प्रहार गरेको हो ? त्यहाको स्थानियको भनाइ अनुसार ढुंगा हानेको देखेको बताएका छन् । को हो त ढुंगा हानेर त्रसित बनाउने व्यक्ति ? तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।